सद्दामले किन मारेका थिए आफ्नै ज्वाइँलाई ? छोरीले गरिन् यस्तो खुलासा || समाचार
सद्दामले किन मारेका थिए आफ्नै ज्वाइँलाई...
सद्दामले किन मारेका थिए आफ्नै ज्वाइँलाई ? छोरीले गरिन् यस्तो खुलासा
access_time 23 Feb 2021
इराकका पूर्वराष्ट्रपति सद्दाम हुसेनकी छोरी रगद सद्दाम हुसेनको स्कुल पढ्दै गर्दा नै विवाह भयो । यतिबेला उनको उमेर केवल १५ वर्ष थियो । विवाहको समय इराक र इरानबीच युद्ध चलिरहेको थियो फेब्रुअरी १९९६ मा २५ वर्षको उमेरमा रगदले आफ्ना माइती पक्षको सल्लाहमा सम्बन्ध–विच्छेद गरिन्, यसको दुुई दिनपछि उनका पतिको हत्या गरियो ।
रगदको विवाह सद्दाम हुसेनका काकाका छोरा हुसेन कमेल अल माजिदसँग भएको थियो । यतिबेला हुसेन कमेल सद्दामको सुरक्षामा खटिएका थिए । सद्दामकी अर्की छोरी राना सद्दामको विवाह पनि हुसेन कमेलका भाइ सद्दाम कमेल अज माजिदसँग भएको थियो ।
दुबै छोरीहरुको विवाह, सम्बन्धविच्छेद र उनीहरुका पतीहरुको हत्याको कथा निकै दर्दनाक छ । २०१८ मा रगद सद्दाम हुसेनको नाम तत्कालीन इराक सरकारले मोस्ट वान्डेटको सुचीमा राखेको थियो ।
रगद सद्दाम हुसेनले अल अरेबियालाई एक साताअघि दिएको अन्तवार्तामा आफ्नो निजी जीवनको धेरै महत्वपूर्ण विषयहरूबारे बोलेकी छिन् ।
१५ वर्षमै विवाह गर्नका लागि बाबु सद्दाम हुसेनले दबाब दिएका थिए वा यो निर्णय रगदले स्वइच्छाले गरेकी थिइन् रु
जवाफमा रगदले भनिन्,‘मेरो पिताले आफ्ना पाँचमध्ये कुनै पनि बच्चालाई विवाहका लागि दबाब दिइनन् । छोरीको विवाहका लागि कसैले प्रस्ताव ग¥यो भनेपनि उनले हामीसँग नै यसबारे के गर्ने भनेर सोध्ने गरेका थिए । उनले पुरै स्वतन्त्रता दिएका थिए । म त्यतिबेला किशोरी थिएँ, गर्मीको दिउँसोको समय थियो । मेरा बाबु ढोका ढक्कढक्याएर आए । उनले म सामु आएर मेरो हालचाल बुझे । त्यसपछि उनले सोधे – तिम्रो एक प्रेमी छ रु उनले नाम पनि बताए ।’
रगदका अनुसार परिवारभित्रकै विषय भएकाले खासै असहज अवस्था थिएन । ‘मेरा बाबुले भनेका थिए कि तिमी सम्बन्धलाई स्विकार्न वा अस्विकार गर्नका लागि स्वतन्त्र छौं । उनले यसो भनिरहँदा म लजाइरहेको थिएँ । त्यसपछि उनले मेरो निर्णय आमालाई सुनाइदिन भने । हुसेन कमेल अल–माजिद मेरा बाबुको रक्षा दलमा थिए, त्यसकारण बाबुसँग उनको भेटघाट दैनिक हुन्थ्यों । मेरा बाबुले अंगरक्षक हरुलाई लन्चमा बोलाउथे, जसमा यी व्यक्ति पनि थिए ।’
रगदले भनिन्, ‘हामी दुबैले एक अर्कालाई प्रेम गर्न थालेका थियौं । मेरी आमालाई थाहा थियो । तब म सानै थिए, तर चाडैं यो प्रेम विवाहमा परिणत भयो । त्यतिबेला म स्कुलमा पढ्दै थिएँ । विवाहपछि पनि मैले पढाई जारी राखेँ र स्नातकसम्मको पढाई पूरा गरें । मेरा पति मेरो पढाइको पक्षमा थिएनन् । सायद उनले इर्श्याका कारण यस्तो गरेका होलान् । इराकमा त्यतिबेला सुरक्षालाई लिएर कुनै चिन्ता थिएन । त्यसकारण स्कुल नजान जिद्दी गर्नुको कारण सुरक्षा सवाल होइन । यद्यपी, मेरा पतिले मलाई प्रेम र सम्मान दुबै गर्थे । उनी मेरा माता–पितालाई पनि आदर गर्थे ।
‘पिताको प्रेमसँग तुलना हुँदैन’
‘मेरा बाबुले मलाई निकै प्रेम गर्दथे । यसको तुलना अन्य कसैसँग गर्न सकिदैँन । उनले जति प्रेम गरे, त्यसको तुलना न पतिसँग न त मेरा आफ्नै बच्चासँग गर्न सकिन्छ ।’
रगदका अनुसार ईराक–इरान युद्धका दौरान उनी स्कुल पढ्थिन् । त्यस लडाइँसँग जोडिएको स्मरणबारे उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला हाम्रो अर्को एक घर थियो । त्यहाँ पनि हामी आउने–जाने गर्न सक्थ्यौँ । एक दिन म स्कुल गइँन किनकी भारी बमबारी भएको थियो ।
मेरा पिता सेनाको ड्रेसमा आएका थिए र उनले स्कुल किन नगएको भनेर सोधे । मैले युद्धको खतराका विषयमा बोले, त्यसपछि उनको जवाफ थियो –ईराकका बाँकी बच्चाहरु स्कुल जाउँदैछन्, तिमी पनि जानुपर्छ । यदी तिमी स्कुल गयौं भने स्कुलमा पढ्ने बाँकी बच्चाहरुको साहस बढ्नेछ । तिमीले उनीहरुको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सद्दाम हुसेनको सन्तान भएकाले कुनै विशेषाधिकार नमिलोस् भन्ने मेरा पिताको चाहना थियो । मेरा दाजुहरूले त इराककै रक्षामा आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए ।’
रगदका अनुसार उनी राजनीतिक फैसलामा सहभागी हुँदैन थिइँन, तर मानवतावादी फैसलाहरुको हिस्सा रहिन् । रगदका अनुसार केही विषयहरुमा पतिसँग पनि उनको बहस हुन्थ्यों ।
पति र पिताबीच टकराव
रगदले आफ्ना पति हुसेन कमेल र पिता सद्दाम हुसेनको सम्बन्धमा आएको दरारबारे पनि बोलेकी छिन् । रगदले भनिन्, ‘म एक्लो थिइँन । जसको पति मारिएको होस् । त्यतिबेला इराकमा ठूलो संख्यामा महिलाहरुले आफ्ना नजिकका व्यक्ति गुमाएका थिए । त्यसमा उनीहरुका पति,पिता र बच्चाहरु समावेश थिए । मेरा पति १९९५ को अगस्ट महिनामा जोर्डन गए । उनले त्यहाँ जाँदा मलाई सम्पर्क गरेका थिए । मलाई लाग्यो कि यदी उनी इराकमै बसे भने रक्तपात हुनेछ । परिवारभित्रै हुनेछ । त्यसैले इराक छाड्ने उनको फैसलालाई मैले समर्थन गरें । सद्दाम हुसेनको छोरी भएकाले मलाई दोस्रो मुलुकमा जान सहज थिएन । यद्यपी, जोर्डनमा हाम्रो स्वागत निकै राम्रोसँग भयो । मलाई कहिल्यै म बाहिरको व्यक्ति हुँ भन्ने लागेन । तर पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीलाई सार्वजनिक गरिनेछ भन्ने मलाई अनुमान थिएन ।’
रगदले अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘जोर्डन गएपछि पत्रकार सम्मेलनमा के भनिनेछ भन्ने मलाई केही अनुमान थिएन । यस पत्रकार सम्मेलनमा हुसेन कैमलले सद्दा हुसेनविरुद्ध बोले । आफु जोर्डन आएपनि सद्दामको शासन हल्लिएको हुसेनको दाबी थियो । उनले इराककी सैनिकहरूलाई सत्ता परिवर्तनका लागि तयार रहन भने ।’
१९९५ को अगस्ट महिनाको दोस्रो हप्तामा हुसेन कमेल अल माजिद र उनका भाइ सद्दाम कमेल इराकबाट जोर्डन आएका थिए । हुसेन पत्नी रगद र सद्दाम कमेलकी पत्नी राना पनि यस उनीहरुसँगै थिए ।
जोर्डन आउनु अघिसम्म दुबै भाई सद्दाम हुसेनका ठूला विश्वासपात्र थिए, उनीहरुले नै सेनाको पुरै काम हेथ्र्यें । इराकको हतियार कार्यक्रम योजना बनाउने काम उनीहरुकै थियो पनि भनिन्छ । जोर्डन आउँदा पनि उनीहरुसँग इराकी सेनाका १५ अधिकारी थिए । तर, जोर्डनका राजा हुसेनले आफ्नो देशमा यी दुईलाई शरण दिएपछि सद्दाम निकै रिसाए । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले राजा हुसेनको फैसलाको स्वागत गरे ।
खास त्यस्तो कारण के थियो, जसले रगदका बाबु सद्दाम र पति हुसेन कमेलबीच दरार सिर्जना ग¥यो रु रगद भन्छिन्, ‘मेरा पतिको शक्ति बलियो हुँदै थियो । मेरा बाबुपछि ईराकमा उनी दोस्रो नम्बरको हैसियतमा पुगिसकेका थिए । परिवारको सदस्य भएकाले उनको भूमिका ठूलो थियो, उनीसँग निर्णय लिने क्षमता पनि थिए । उनीसँग हरेक भूमिकालाई ठीकसँग निभाउने साहस थियो । मसँग विवाह हुनभन्दा पहिलेदेखि नै उनी यस मामिलामा अघि बढिसकेका थिए । हाम्रो विवाहपछि हुसेन कमेल स्पेशल सेक्युरेटीका प्रभावी थिए ।’
पतिको हत्याको फैसला मेरै माइतीको थियो
हुसेन कमेलसँग सम्बन्धविच्छेदबारे रगद भन्छिन् । ‘हुसेनले इराक छाडेपछिको अवस्थालाई झेल्न सकेनन् । एक महिनामात्रै यसको अनुमान भइसकेको थियो । सम्बन्ध विच्छेदको फैसला फेब्रअरी १९९६ मा इराक फर्किएको एक दिनपछि नै लिइएको थियो । मैले आफ्ना बाबुसँग कुराकानी गरेर निर्णय लिएँ । मेरा बाबु निकै दुखी थिए । उनीसँग लामो कुराकानी भयो । उनी यति दुखी थिए कि कुराकानी गर्ने अवस्था समेत थिएन । यतिबेला मेरा दाजु पनि बाबुसँग थिए र कुराकानीपछि तलाक दिने निर्णय भयो ।’
जोर्डबाट फर्किएको तीन दिनपछि हुसेन कमेल र उनका भाइ सद्दाम कमेलको हत्या गरियो । सद्दाम कमेलको विवाह सद्दाम हुसेनकी दोस्री छोरी राना सद्दामसँग भएको थियो ।
रगद हुसेनले अन्तर्वातामा भनेकी छिन् कि उनका पतिको हत्याको निर्णय उनकै परिवारको थियो । रगदले आफ्ना पतिका हत्यामा आफ्नै भाइ उदय सद्दाम हुसेनको पनि संलग्नता रहेको स्विकारेकी छिन् । रगद भन्छिन्,‘जब मेरा पतिको हत्या भयो, तब म २५ वर्षकी थिएँ । कति दुख लागेको थियो भन्ने बताउन सक्दिनँ । मेरा पितालाई पनि मेरो दुख महसुस भएको थियो र उनले मलाई साहारा दिने प्रयास पनि गरेका थिए ।’
२००३ मा इराक र अमेरिका हमलापछि रगद जोर्डनमा गइन् र अहिले त्यही बसिरहेकी छिन् ।